Awood-baahinta adeegyada diiwaangelinta-Cadastre ee qaybta dawladdu - Geofumadas
Maarso, 2017 cadastre, Baridda CAD / GIS
Tani waa abstract of bandhig bandhig ah oo ku dhici doona in Shir sannadeedka Guryaha iyo DhulkaGaliyey Bangiga Adduunka maalmaha soo socda March 2017. Alvarez iyo Ortega hadli doona oo ku saabsan waayo-aragnimo ah ee daadajinaya Diiwaangelinta adeegyada / Cadastre on model Office Front-Back ah, haddii ay taasi ku Banking Private ah, sida lagu sheegay war ka 2014 Cadastre "Mustaqbalka, waaxda khaaska ah iyo waaxda dawladuba way wada shaqeyn doonaan."
Baahinta hantida adeegyada ayaa lagu soo daray mid ka mid ah shuruudaha loo baahan yahay si loo waajaho caqabadaha in kacayaan koritaanka hantida macaamil nabay mugga ay leedahay in la filayo goor wanaagsan ee dadka isticmaala si loo hagaajiyo tayada adeegyada, hoos u dhigista qiimaha iyo wakhtiyada jawaabta ee keenaya diiwaangelinta wanaagsan.
Iyada oo la adeegsanayo qaabkan Nidaamka Qaranka ee Maamulka Hanturas (SINAP), waxay raadineysaa in ay bilaabaan waddada tooska ah ee baahinta, iyagoo rajeynaya in ay gaaraan wax ku oolnimada, daahfurnaanta, dhaqdhaqaaqa macaamilka; sidaas awgeed abuuraysa wacyigelin ballaaran oo ku saabsan suuqa dhulka.
Miisaaniyadii maamulkii baahsanaa.
Management System of Property ee Honduras, ku salaysan Law Hantida la ogolaaday oo amar 82-2004 awood Institute Property u doorataa iyo nidaaminaya Associated Center in ay ku shaqeeyaan oo ay u maareeyaan adeegyada diiwaanka in ay ku xiran tahay Institute Property ah, ka fiirsaneysa maareynta adeegyada iyada oo loo marayo iskaashi guud ee gaarka loo leeyahay ayaa dardargelisay nidaamka iyo hababka in ay ka jawaabaan dalabka looga baahan yahay dhismaha iyo soo nooleynta of suuq ah.
In July 2006 Associated Center ugu horeysay ee ay u soo ka Chambers Ganacsiga iyo Warshadaha ee Honduras, si ay u shaqeeyaan iyo maarayn diiwaanka ganacsiga, diiwaanka waxaa ka mid ah adeegyada oo weeyaan diiwaangelinta oo ka mid ah dastuurka shirkadaha iyo diiwaangelinta ee dhaqdhaqaaqa xubnaha aasaasay iyo caasimada.
In April 2016 Associate labaad ugu horeysay on diiwaan-cadastre, wuxuuna siiyey Bank Honduran ee Production iyo Housing (BANHPROVI), u maareeyaan iyo shaqeeyaan xawaalad diiwaanka la xiriira faylalka tacliimeed ee macaamiisha helaan Center lacag BANHPROVI la sameeyay amaahda.
In October 2016 Associated Center saddexaad baa la sameeyey, kii labaadna wuxuu ku saabsan diiwaangelinta-cadastre, ay u soo Banco Financiera Comercial Hondureña SA (FIHCOSA) maareeyo iyo shaqeeyaan xawaalad diiwaanka la xiriira faylalka tacliimeed ee macaamiisha helaan lacagaha amaah FIHCOSA guryaha
Iyadoo loo marayo nidaamkan baahinta baahinta adeegyada diiwaangalinta, SINAP waxay raadineysaa inay kor u qaaddo maamulka dhaqaalaha iyo maamulka dhaqaalaha ee khayraadka, iyada oo loo marayo faragelinta ka timaadda qaybaha gaarka loo leeyahay, bulshada rayidka ah iyo hay'adaha caalamiga ah ee iskaashiga ah, kobcin dadaalka.
Hirgelinta Xarumaha Aasaasiga ah ee habka awood-baahinta ee Maamulka Hantida ee Honduras.
Iyadoo koboca sanadle ah 12.7% in xawaalad hantida diiwaan ah model Office Front iyo Back si ay u hagaajiyaan uq iyo hufnaan macaamil diiwaanka hantida la fuliyo, ma ku guulaysteen yaraynta wakhtiyada jawaab u user dhamaadka.
Marka la ansixiyo qaabka diiwaangelinta hantida, waxaan fududahay abuurista Xarumaha Diiwaangelinta Xarumaha Associated-Cadastre si ay u shaqeeyaan xeerarka iyo hal teknoolajiyad teknoolajiyo oo ay aasaaseen Xafiiska Diiwaanka Hantida ee Honduras.
Bangiga Gaarka ah wuxuu u dhexeeyaa celceliska 31 Milyan Dollar sanadkiiba rahaadada iibinta Real Estate sidaa daraadeed waa jilidda ugu muhiimsan ee yareynta jawaab celinta ee diiwaangelinta macaamiilyada ku saabsan guryaha hantida maguurtada ah.
Faa'iidooyinka Nidaamka Hantida ee Honduras.
Isku hagaajinta maamulka dadweynaha, hagaajinta adeegyada muwaadiniinta iyada oo loo marayo shabakad adag oo hufan, oo dhammaan dhaqdhaqaaqyada ay u hoggaansamaan geeddi-socodka hantidhawrka adag.
Xeerarka, xakameynta iyo kormeerka hawlaha.
Xarun kasta oo xaruntu waxay ku xiran tahay shuruucda iyo nidaamyada ay sameeyeen Agaasiyadaha Diiwaan-gelinta Hantida, sida qawaaniinta, heshiisyada habraaca, buug-gacmeedyada iyo tilmaamaha shahaadaynta.
Markaasaa waxaa u wanaagsanaan doonaan iyo in la arko bogagga buuxa document 10, PowerPoint iyo dheeraad ah in lagu dabaqo nuqul ka iyo koollada, waa muhiim in la fahmo sida dal soo koraya arki kartaa model ganacsiga dhamaadka diirada user. Dabcan, casharro la bartay iyo isku day guuldareystay inta aan la gaadhin hal dhibic nabad geli doonaa ugu waxtarka badan waana mid istaahila in shir kale.
Post Previous«Previous dhiismeedka
Post Next Abaalmarinta "Oscar of Kaabayaasha" waxay noqon doontaa SingaporeNext »